Guud ahaanba waxa la soo afjaray codbixintii doorashada iyo tirintii codadka oo bilaabantay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Guud ahaanba waxa la soo afjaray codbixintii doorashada iyo tirintii codadka oo bilaabantay
Published on November 13, 2017 by sdwo · No Comments
Waxaa saacada Somaliland markay ahayd 6 fiidnimo la soo afjaray codbixintii doorashada madaxweynaha ee dalka maanta ka dhacaday iyadoo ay jireen goobo waxoogey ah oo weli dadku kiyuugu ku jiray markay saacadu ka dhacday taasi oo la ogolaaday in inta kiyuuga ku jirtaa codeyso.
Goobahaha codbixinta ayaa si nabadgelyo ah ku dhamaaday intooda badani, iyadoo wararka hargeysa naga soo gaadhayaa shegayaan in dhawr goobood xisbiga Wadani isku deyey in la khakhal geliyo si loo xidho oo aan kulmiye cod goobahaasi uga helin. Waxa ka mid ahayd iskulkii biyo dhacay oo muraaqibkii u fadhiyey wadani uu intuu xanaaqay jeejeexay warqaadahii qaar miisaskiina jejbiyey taasi oo sababtay in ninkii askartu dibada u soo tuuran, goobtana la xidho mudo 2 saacadood ah inta wadani uu soo bedelanayo goobjoogahiisa. Waxa kale oo jirtay dhawr gobood oo tageen Ismacill yare iyo Maxamed Bixii Yoonis oo isku deyey inay kiciyaan iskana hor keenaan dadkii kiyuuga ku jiray si goobahaasi oo Kulmiye ku xoog roonyahay loo xidho, hase yeeshee way ku guuldaraysteen waanana la shiiday sida ka muuqata labada fiidyow ee laga duubay labadii goobood ee ay tageen ee 150 ka iyo ganadhi iskuul. Wararka qaarbaa sheegay in la farasaaray Ismaciil oo si qaawan u weeraray una caayey dumarkii kiyuuga ku jiray.
Waxa goobo badan markiiba ka bilaabmay tirinta cododka iyagoo goob joog ka yahiin muraaqibiinta sedexda xisbig qaran.
Dhinaca kale waxa 6.20 hawada laga saaray sidii la sii iclaamiyey dhamaan goobaha internetka ee bulshadu ku wada xidhiidho, si loo ilaaliyo in warar been abuur ah la is weydaarso oo nabadgelyada khalkhal geliln kara, dhinaca kale waxa 8 habeenimo dib loo fasaxi doonaa isku socodka baabuurta oo la mabnuucay maanta.
Sedexda xisbi ayaa mid waliba dhankiisa u sheeganayaa inay isagu guushu raacayo oo dadku u codeeyeen, hase yeeshee waxa la sugaaba waa marka ay soo baxdo natiijada dhabta ah oo la filayo in la soo saaro mudo 7 cisho gudahood ah.